Beta mu dropper, ino nguva ndiyo beta 4 ye watchOS 8.1 | IPhone nhau
Betas in dropper, panguva ino ndiyo watchOS 4 beta 8.1
Apple yakaburitsa beta 4 yevagadziri vewatchOS 8.1 maawa mashoma apfuura. Mushanduro itsva iyi izvo zvinonyanya kupihwa ndezvi gadziriso dzebug dzakawanikwa mune yakare vhezheni uye kugadzikana kuvandudzwa yehurongwa pachayo. Mune idzi beta vhezheni dzevagadziri dzakaburitswa mumaawa ekupedzisira, izvo Apple inoda kuchengetedza kugadzikana kwakanyanya mavari kuti vakwanise kuvhura iyo yekupedzisira vhezheni munguva pfupi. Aya mavhezheni ekupedzisira evashandisi vese haasvike kusvika pamwe mwedzi waNdira.
Ini pachangu, ini handisi mushandisi anoshandisa beta vhezheni pamidziyo kupfuura iyo yakaburitswa yeMac, ndinogara ndichiiisa asi pane yekunze dhisiki kudzivirira matambudziko. Sarudzo yekuisa aya mabeta matsva haindiedze zvakanyanya nekuda kwezvinyowani zvavanowedzera, hazviratidzike kuti tine shanduko dzakawandisa ndosaka ndichiona zviri nani kumirira vhezheni yekupedzisira. Chero zvazvingava, vese vanotova neyakapfuura beta vhezheni yakaiswa paApple Watch vanongofanira kudaro kugadzirisa kubva kuApple Watch zvaunofarira kuburikidza neOTA uye voila, ivo vachatove vaine beta 4 yakaiswa.
Izvo isu zvatinofanirwa kuve zvakajeka nezvazvo ndeye beta vhezheni yeApple Watch, isu tinofanirwa kungwarira zvikuru nekuti dambudziko mariri raigona kusiya wachi yedu zvachose isinga shande. Chinhu chine musoro ndechekuti izvi hazviitike kubva ipapo tanga tiine yeruzhinji beta vhezheni kwenguva yakati kunyangwe pawatch uye zvinoita kunge zvinoshanda zvakanaka, Asi ziva kuti mabheja ndeeyedzo shanduro uye kuti havagone kushanda nguva dzese zana% mumabasa avo uye mune zvinoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Betas in dropper, panguva ino ndiyo watchOS 4 beta 8.1
Iyi ndiyo mitambo yakanakisa uye maapplication e2021 akapihwa neApple App Store Awards
Jabra Elite 3, madzimambo emahedhifoni pasi pe € 100